Saturday May, 30 2020 - 22:10:00
Thursday April 25, 2019 - 10:27:18 in by salman abdi
Orod-yahanka Calaamiga ee Mo Farah ayaa sheegay in dhac xooggan loogu geystay qolkii uu ka degganaa Hotelka Yaya Africa Athletics Village oo ku yaalla caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Abeba, wuxuuna sheegay in la jabsaday shandadiisa xilli uu ku maqnaa Tababar Laylin Orod.
Mo Farah oo ah dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland caan ku ah Orodada Marathon-ka ayaa sheegay in laga dhacay lacag dhan 2,500 oo Giniga Ingiriiska, 11,850 Dirhamka Imaaraadaka, 2 Mobayl iyo Sacaad Qiimo weyn leh oo ay xaaskiisa haddiyad ahaan u siisay.
Dhinaca kale, Mo Farah waxa uu cambaareeyey Orod-yahanka Ethiopian-ka, Haile Gebreselassie oo ay isla degganaayeen Hotelka dhaca loogu geystay, wuxuuna xusay inuu Orod-yahanka Ethiopianka ku guul-daraystay inuu isaga caawiyo, kadib markii dhaca loogu geystay Hotelka Yaya Africa Athletics Village oo ay Ethiopian leeyihiin.
Mo Fraah waxa uu tilmaamay inuu taageero kooban ka helay Shaqaalaha Hoteelka, wuxuuna xusay in aanu Haile Gebreselassie marnaba ka taageerin dhaca loo geystay.
Dhinaca kale, mar lala xidhiidhay Milkiilayaasha Hotelka lagu dhacay Mo Fraah waxay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan Telefoonadooda, si wax looga weydiiyo falka lagu dhacay mid ka mid ah Macaamiisha Hoteelkooda.